Zvinyorwa zvaCaroline Nhema pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Caroline Nhema
Caroline ari munyori uye zvemukati mushambadzi we Mafungiro Akachengeteka. Nyanzvi mukuchengetedzwa kweterevhizheni, iye anoziva nezve kukuvara uko malware inogona kuita kumisangano yako yepamhepo. Iye anonyatsoziva kutyisidzira kwepamhepo uye mukana wevabiribiri kubira mawebhusaiti uye nzira dzekusimudzira. Semushambadzi wekare, ane shungu dzekugovana zviitiko zvake nevanhu vane pfungwa dzakafanana kuti internet ive nzvimbo yakachengeteka.
Kukanganisa: Zvinorevei Kune Yako Dhijitari Kushambadzira Campaign?
Muvhuro, Zvita 5, 2016 Caroline Nhema
Gore rinotevera rakagadzirirwa kunge riri gore rinonakidza kushambadzira kwedhijitari, nekushandurwa kusingaverengeki kwekupayona kune nzvimbo yepamhepo. Iyo Internet yezvinhu uye kufambisa kune chaicho chokwadi chinopa mukana mutsva wekushambadzira pamhepo, uye zvitsva zvitsva musoftware zvinogara zvichitora nzvimbo yepakati. Nehurombo, zvisinei, hazvisi zvese izvi zviitiko zviri zvakanaka. Ivo vedu vanoshanda online vanogara vachisangana nenjodzi yematsotsi, avo vasinganeti vanowana nzira nyowani dzekuwana